यो सम्धी,सम्धिनी, छोरी-बुहारी, भाइ-भतिजाको पार्टी होइन: प्रधानमन्त्रीओली «
यो सम्धी,सम्धिनी, छोरी-बुहारी, भाइ-भतिजाको पार्टी होइन: प्रधानमन्त्रीओली
प्रकाशित मिति : 8 January, 2021 6:18 pm
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक काठमाडौं बाहिर निस्किए । उनले शुक्रबार नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रलाई सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा ओलीले सुदूरपश्चिमको विकासका विकास र देश विकासका सपना बाँडे ।सम्बोधनकै क्रममा ओलीले नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई कटाक्ष गर्न बिर्सिएनन् ।
ओलीले नेपाल -दाहालमाथि खनिए । उनीहरुलाई ओलीले भगौडादेखि पिलोसम्मको संज्ञा दिन भ्याए । सम्बोधनका क्रममा उनी नेपालभन्दा पनि प्रचण्डमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । ओलीले प्रचण्डलाई जनाताको भन्दा पनि छोरी, बुहारीको मतलब राखेको आक्षेप लगाए । प्रचण्डले परिवार र नातागोताका अधिकांश सदस्यलाई जागिर खुवाएको आरोप खेप्दै आएका छन् ।
“उहाँहरुले ठूला-ठूला कुरा गरिरहनुभएको छ । पार्टी उहाँहरुको रे । जसलाई छोरीहरुको मतलब छ, बुहारीहरुको मतलब छ । जनताको मतलब छैन । यो सम्धी, सम्धिनी, छोरी-बुहारी, भाइ-भतिजाको पार्टी होइन,’’ ओलीले भने ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई पार्टीमा ल्याउँदा उनको विचार र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नपाएको जिकिर गरे । “काम लाग्छ कि भनेर मैले प्रचण्डलाई पार्टीमा ल्याएको थिएँ । मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ । धेरै स्याम्पु सिद्धियो, धेरे डल्ला साबुन सिध्दियो । ड्रमका ड्रम पानी सकियो जस्ताको तस्तै । बानी जस्ताको तस्तै, विचार, प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै,’’ उनले नेताहरुलाई लाटोकोसेरोको संज्ञा पनि दिए । कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्ड संघर्षको मैदानमा हुँदा राजनीतिसमेत नसुनेको र अहिले आफू जेठो भएको दाबी गरेको भन्दै कटाक्ष गरे ।
“तीनवटा भोटा बढ्ता फटाएको छु मैले । मलाई पहिलो अध्यक्ष छोड्दिनुस् भन्नु भो । अनि मैले मानेँ ? तीनटा भोटा मात्रै फटाको हो मैले ? ०३८ सालमा उहाँ मास्टरी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म जेलमा परिसकेको थिएँ । ०२७ सालमा जेल परेर मुद्दा लागेको थियो । म ०२५ सालमा सुस्ता महेशपुरको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्दा गिरफ्तारमा परेर लाठी खाने गरेको थिएँ । कहिले हो ०२५ साल भन्या पुष्पकमल दाहालजी थाहा छ । कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । तीनटा भोटो फटाएँ रे । उहाँले राजनीति सुन्नुभएको थिएन जब म संघर्षको मैदानमा थिएँ,’’ ओलीको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई आफूले राजनीतिमा ल्याएको दाबी पनि गरे । अहिले नेपालले आफू जेठो भएको बताउने गरेको भन्दै कटाक्ष पनि गरे ।
” मैले उहाँलाई ०२९ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पढ्दै गरेको बेला राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर उतसाही गरेको । उहाँ ०३२ सालदेखि राजनीतिमा लाग्नुभयो । म २२ सालदेखि । अहिले उहाँ केपी ओलीभन्दा सिनियर भन्नुहुन्छ । म जेलमा हुँदा पोलिटब्युरोमा हुनुहुन्थ्यो रे,’’ उनको भनाइ थियो ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नहुने जिकिर गर्दै संविधान पढ्न आग्रह पनि गरे । “प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भनेर हल्ला चलाइएको छ । म तिनीहरुलाई कोरा राजनीति मात्र नगरेर एकपटक संविधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ६४ प्रतिशत संसद्‌को प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री म हुँ । देशको समय बर्बाद हुने भयो, काम गर्न दिएनन् भनेर संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरें,’’ उनको जिकिर थियो ।
ओलीले संवैधानिक व्यवहारिक, कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कुनै हिसाबले संसद् पुन:स्थापना नहुने ठोकुवा गरे । चुनाव निर्धारित समयमै हुने ठोकुवा गर्दै चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन पनि दिए ।